Cathay Pacific waxay baajisay duullimaadyadii ka dib markii shaqaaluhu ay diideen sharciyo karantiil oo cusub
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airlines » Cathay Pacific waxay baajisay duullimaadyadii ka dib markii shaqaaluhu ay diideen sharciyo karantiil oo cusub
Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Caafimaadka Warka • Wararka Hong Kong • News • Dadka • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Ammaanka • Shopping • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda
Cathay Pacific waxaa lagu qasbay inay baajiso qaar ka mid ah duullimaadyadeedii rakaabka ee Hong Kong ka dib markii inta badan shaqaalaheeda ay diideen inay raacaan xeerarka karantiil ee side.
As Hong Kong waxay raadinaysaa istaraatiijiyad 'COVID-eber' ah si ay dib ugu furto xadka ay la wadaagto dhul weynaha Shiinaha, oo ah mid ka mid ah shirkadaha diyaaradaha ee ugu weyn Aasiya iyo xamuulka guryaha ee Hong Kong, Cathay Pacific waxay aad u daneyneysay inay ka caawiso maamulka magaalada tallaabadan.
Cathay Pacific waxay weydiisay shaqaalaheeda qolalka iyo duuliyeyaasheeda inay iskaa wax u qabso ugu qabtaan nidaamka 'loop xiran' bisha Disembar. Tani waxay ku lug lahayd shaqada saddex toddobaad oo isku xigta, joogista Hong Kong si kooban oo keliya, ka hor laba toddobaad oo karantiil ah markay soo laabteen.
Si kastaba ha ahaatee, shirkaddu waxay u muuqataa inay haysatay tabaruceyaal aad u yar oo ku shaqeeya jadwalkan maadaama qaar badani ay rabaan inay guriga joogaan Christmas-ka.
Cathay Pacific ayaa lagu qasbay in ay baajiso qaar ka mid ah duullimaadyadeedii rakaabka Hong Kong ka dib markii inta badan shaqaalaheeda ay diideen inay raacaan xeerarka karantiil ee side.
Sababta oo ah baqashada shaqaalaha, Cathay Pacific ayaa lagu qasbay in ay u beddesho saddex-meelood meel hal meel duulimaadyadeeda xamuul halkii ay ka qaadi lahaayeen rakaab.
Xayiraadaha shaqada iyo safarka ee sii jira waxay sii wadaan inay carqaladeeyaan awoodeena inaanu duullimaadyada u shaqayno sidii aan qorshaysnayn. Waxaan xoojineynaa jadwalka duulimaadka rakaabka ee Diisambar 2021, oo ay ku jiraan baajinta tiro duulimaadyo ah oo ku socda Hong Kong” ayuu yiri af hayeen u hadlay Cathay Pacific.
Shirkaddu waxay diyaarin doontaa ballan kale oo ku saabsan duullimaadyada rakaabka ee soo hadhay si ay u dejiso macaamiishii la joojiyay duulimaadyadoodii.
In kasta oo xeerarka karantiil ee adag ee Hong Kong, kiisaska COVID-19 ay dib u soo noqonayaan, iyadoo saddex duuliye oo xamuul ah oo Cathay Pacific ah ay dhowaan tijaabiyeen togan ka dib markii ay ka yimaadeen Frankfurt.
Laba kiis oo ka mid ah noocyada cusub ee COVID-19 ee koonfurta Afrika, kaas oo durba sababay dhowr waddan oo EU ah inay soo celiyaan xayiraadaha safarka, ayaa sidoo kale laga helay dadka safarka ah ee ku jira karantiil, Waaxda Caafimaadka ee Hong Kong ayaa ku dhawaaqday Jimcihii.